Shirkadda isgaadhsiinta MTN oo lagu eedeeyay laaluushidda Taliban iyo Al-Qaacida | Hangool News
Shirkadda isgaadhsiinta MTN oo lagu eedeeyay laaluushidda Taliban iyo Al-Qaacida
December 31, 2019 - Written by Hangool News 1
Shirkadda isgaadhsiinta ugu sareysa Afrika ee MTN, ayaa sheegtay in ay baadheyso eedaha la xiriira in ay lacag badan siisay kooxo xagjiriin ah oo ka howlgala dalka Afghanistan.
Arrintaas waxaa lagu sheegay dacwad rasmi ah oo Jimcihii loo gudbiyay maxkamad ku taalla Mareykanka, waxaana lagu sheegay in shirkadda ay jebisay sharciga argagixiso la dagaallanka ee Mareykanka u yaalla.
Kiiska dacwadda ah waxaa gudbiyay qareenno matalaya qoysaska dadkii Mareykanka ahaa ee ku dhintay weerarradii ka dhacay Afghanistan.
Shan shirkadood oo kale ayaa magacooda lagu sheegay warbixintaas.
Dacwadda waxaa lagu xusay in MTN ay lacag laaluush ah siisay Al-Qacida iyo Taliban, si ay u taagato anteenooyiin qaali ah oo aan ilaalo u baahnayn.
Lacagta la sheegayna waxay Taliban ku maalgelisay weerarrada gaadmada ah ee Afghanistan ka dhacay muddadii u dhexeysay 2009 illaa 2017, sida warbixinta eedaha lagu qoray.
Waxaa kale oo ay sheegeen in dhaqaalahaas ay kooxahaas ku iibsadeen “agab lagu garanayo argagixisada,” taas oo xadgudub ku ah shuruucda la dagaallanka argagixisada.
Shirkaddan isgaarsiinta ee laga leeyahay Koonfur Afrika waxay sheegtay in ay tahay mid ku taagan fikaradda ganacsiga ee ah “mid masuuliyad ku dheehan tahay iyo habraaca dhammaan dhulalka ay ka howlgasho”.
MTN waa shrkadda ugu wayn Afrika ee dhanka isgaarsiinta, dhanka caalamka waxay kaga jirtaa kaalinta sideedaad. Waxay leedahay 240 milyan oo qof oo adeeggeeda isticmaala.
Sannadkii 2015-kii, dowladda Nigeria waxay shirkaddan ku xukuntay lacag ganaax ah oo gaareysay $5 bilyan oo dollar, ka dib markii ay ku fashilantay in ay xirto lambarada aan diiwaan gashaneyn. Loolan sharci oo dheer ka dib, iyo markii madaxweynihii South Afrika Jacob Zuma uu soo farageliyay, waxaa MTN laga qaaday $1.7 bilyan oo dollar.
Bishii February, waxaa magaalada Pretoria lagu xiray safiirkii hore ee South Afrika u qaabilsanaa Iran. Waxaa lagu eedeeyay in uu MTN ka caawiyay in ay ku guuleysato mashruuc gaarayay $31.6 bilyan oo dollar.
Safiirkaas ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in uu laaluush ka qaatay MTN, kana caawiyay in ay hesho shatiga shaqo ee dalka Iran.